News | MYNFREL
Posted By: MYNFRElon: အောကျတိုဘာ 26, 2021 In: News
Federal-Democracy-Charter_MM Federal-Democracy-Charter-English Read more
Posted By: MYNFRElon: နိုဝငျဘာ 10, 2020 In: News, သတငျး, အခကျြအလကျမြား
ရှေးကောကျပှဲနကေ့နဦးအစီရငျခံစာ အနှဈခြုပျထုတျပွနျခကျြ နိုဝငျဘာလ၊ (၉) ရကျ၊ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ လှတျလပျမြှတသောရှေးကောကျပှဲမြားပံ့ပိုးကူညီရေးအဖှဲ့ (MYNFREL) အဖှဲ့မှ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထေ... Read more
Posted By: MYNFRElon: ဇူလိုငျ 02, 2019 In: News, သတငျး
2. Electoral News May-II-2019_MYNFREL Read more
ရှေးကောကျပှဲဆိုငျရာ သတငျးမြား စုစညျးမှု (မလေ၊ ၂၀၁၉ခုနှဈ)
Posted By: MYNFRElon: ဇှနျ 25, 2019 In: News, သတငျး
1. Electoral News_May_2019_MYNFREL Read more
ပည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးမည့်သူများ၏ စာရင်းကို အတိအကျ ဖြစ်စေရန် မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပြီး အဆိုပါ ဆောင်ရွက်ချက်ကို မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိစေရန် အတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်း
Posted By: MYNFRElon: မတျ 07, 2019 In: News, သတငျး, အခကျြအလကျမြား
၆.၃.၂၀၁၉ —————– ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးမည့်သူများ၏ စာရင်းကို အတိအကျ ဖြစ်စေရန်... Read more
ခန့်အပ်မှုအတည်ဖြစ်ပါက ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးဖြစ်လာမည်
Posted By: MYNFRElon: မတျ 06, 2019 In: News, သတငျး, အခကျြအလကျမြား
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦးခန့်အပ်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ပေးပို့ရာ ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် သမ္မတက ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်... Read more
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့ထားသော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည် နှင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပေးပို့ထားသော ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အမည် နှင့် ကိုယ်ရေးအကျဉ်း *********************** နေပြည်တော် မတ် ၅ Posted... Read more
Democratic Statebuilding and the role of youth Panlong
Posted By: MYNFRElon: ဖေ‌ဖျောဝါရီ 15, 2019 In: News, သတငျး, အခကျြအလကျမြား
သူငယ်ချင်းတို့ရေ…………🗳🗳🇲🇲📣📣 ဖေဖော်ဝါရီ (၁၂)ရက် ပြည်ထောင်စုနေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော “ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနှင့် လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ” နှီးနှောဆွေ... Read more
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနှင့် လူငယ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
ပြည်ထောင်စုနေ့ ပင်လုံမြို့မှာ ဆွေးနွေးခဲ့လေသော (ဓါတ်ပုံများကို ဆရာမ ဒေါ်ခင်မမျိုး FB ပေါ်မှာ ယူခဲ့သည်) photo credit; Posted by Khin Hnin Kyi Thar on Tuesday, February 12, 2019 Read more
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း(၂၀၁၉ ခုနှစ်)
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်မှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်း Read more